Isa — MYSTERY ZILLION
June 2010 edited June 2010 in Windows Server
ကျနော်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ISA တင်ချင်လို့တဲ့ ဗျာ... တခြားနယ်က ဆိုတော့ သွားတင်လို့လဲ မရနဲ့။ ကူညီပေးစေချင်ပါတယ်။ဖြစ်နိုင်ရင် စာအုပ် လိုချင်လို့တဲ့ ဗျာ... ကျနော်လည်းရှာရတာ များနေပြီ မတွေ့ဘူးခင်ဗျ... အဆင်ပြေမဲ့ သူများရှိရင် တင်ပေးစေချင်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် အဆင့်ဆင့် ပုံလေးနဲ့ ပါ ပြထားတဲ့ စာအုပ်မျိုးရှိရင်လည်း လိုချင်ပါတယ်။ မရှိရင်လည်း post ထဲမှာ ရေးပေးပေါ့။ အားမှပါ။ ဟဲဟဲ :frown:
ကိုမိုးနတ်သားပြောတာဘယ်လိုစာအုပ်ကိုပြောတာလဲ??? Ebook လား? ဒါမှမဟုတ် အပြင်မှာဖတ်လို့ရမယ့်စာအုပ်မျိုးကိုပြောတာလား? .. အဟတ်
Online မှာဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်ကတော့ Google မှာပဲ ISA နဲ့ပတ်သတ်တာတွေရှာကြည့်စေချင်တယ်... Google မှာ မသိဘူးဆိုတာ ... မြူမှုန်လောက်တော့ရှိမှာပါ... ^.^
.... သြော်... အနော်ကြောတာမှားရင်ဆောတီးနော်... အဟတ်
MyanmarTutorials.com မှာ Ko Kyaw Zwar ရေးထားတဲ့ ISA Server 2006 အတွတ် Step-by-step guide တွေပါ။
စာအုပ်တွေလွယ်လွယ်ကူကူ၀ယ်လို.ရရင်တော. ဦးဇော်လင်း ရေးတဲ. guide to internet security &acceleration server 2006 စာအုပ်လည်းကောင်းပါတယ် ။ e-book လိုချင်ရင်တော. member ဖြစ်ရမယ်ထင်တယ်။
ဖြေဆိုပေးတဲ့ ညီအကိုများကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.... ကျနော်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က တစ်ခြားတစ်နေရာမှာပါ။ အဲဒါကြောင့် E-book ပို့ပေးလို့ပဲ အဆင်ပြေမှာပါ။ Xray ပေးတဲ့ လင့်ကနေ့ ebook လုပ်ပြီးပေးလိုက်ပါပြီ။ ကျန်တဲ့ သူများကိုလည်း ကျေးဇူးပါတယ်။